Kepel: «L’État islamique vise l’installation du califat sur les ruines de l’Europe»
22/06/2016 hasina 7745
Dans le cadre de la célébration des journées informatives sur les Actions de lutte contre les Changements Climatiques, le Bureau National de Coordination des Changements Climatiques organise un concours ouvert au public et aux étudiants …Tohiny
Voahangy Rajaonarimampianina-Nandray anjara amin’ny fanadiovana ny Renivohitra
22/06/2016 hasina 8140
Taorian’ny fanatanterahana ny tetikasa HIMO tany amin’ny faritra manerana an’i Madagasikara dia anjaran’Antananarivo indray izao. Ity tetikasa izay voizin’ny vadin’ny filoham-pirenena Voahangy Rajaonarimampianina mba hisian’ny fahadiovana manerana ny tanàna izay miaro ny fahasalamam-bahoaka. Toerana maro …Tohiny
Fanafihana kamiao tao Ambositra-VOAROBA NY 100 TAPITRISA ARIARY
22/06/2016 hasina 10109
Kamiao iray nitondra olona efatra avy aty Antananarivo indray no nosakanan’ny jiolahy tamin’ny 07 Septambra 2016 lasa teo tokony ho tamin’ny roa ora maraina raha handeha hizotra ho any Ambalavao haka omby. Araka ny loharanom-baovao …Tohiny
Fikambanana masoandro mody-NAHAZO FANAMPIANA AVY AMIN’NY VADIN’NY FILOHA
22/06/2016 hasina 13625
Miisa 308 ireo be antitra voan’ny Alzheimer tezaina ao amin’ny Madagasikara Alzheimer Masoandro mody izay hita etsy Ambohimiandra ankehitriny. Misedra olana goavana izy ireo amin’ny fampihodinana ny fikambanana noho ny tsy fahampian’ny enti-manana ara-bola. Manana …Tohiny
Berry Elmore dans L’incendie du Rova de Manjakamiadana, 20 ans plus tôt
Fianarantsoa : Misy ny mpikarama an’ady
Fako eto Antananarivo : Nohitsian-dRavalomanana ny minisitry ny Rano
Berry Elmore: I don't commonly comment but I gotta say thanks for the post on this great one :D.